परिचित-देख संख्या हो नवीनतम मोड मा भिडियो डेटिङ
चांग मा देखिन्छ अब व्याप्त प्रकारको भिडियो डेटिङ — छिमेकीलाई. यी हुन् स्वचालित कल देखि आ फोन नम्बर हेर्न कि यस्तै प्राप्तकर्ता आफ्नै फोन नम्बर. यहाँ कुरा हो भन्ने लाग्न सक्छ परिचित छ । आफ्नो सेल फोन छल्ले, र नम्बर भन्ने चमक स्क्रीन भर नै क्षेत्र कोड र उपसर्ग. त्यसैले तपाईं माथि टिप्न, र तपाईं मिल्यो — यो एक फेरि । यो भएको गर्नुपर्छ भइरहेको ननस्टप गर्न चांग देखि गरेको ग्रह पैसा बिना, त्यसैले त्यो गए किन बाहिर आंकडा. चांग, बाइलाइन: पैसा सोधे श्रोताहरूले ‘ कि फोन नम्बर हेर्न यस्तै आफ्नै फोन नम्बर.
क्रिस: ‘. म देख्नुहुनेछ कि यो मेरो क्षेत्र कोड, प्लस नै पहिलो तीन संख्या । उमर विलियम्स:, मेरो भगवान, हाँ. र बस म मिल्यो एक दस मिनेट पहिले तपाईं भनिन्छ, वास्तवमा को कुरा को रूप. नमस्ते, यो एलिजाबेथ देखि रिसोर्ट, हाँ (हाँसो) । एलेक्स: म थियो, चार विभिन्न फोन कल भनेर मा आठ मिनेट मङ्गलबार बिहान । म अर्थ, यी सबै संग शुरू मेरो क्षेत्र कोड र मेरो पहिलो तीन अंक छ । जनसन: म उठाया फोन र देख्यो कलर आईडी. र म अनुमान म मिल्यो एक गडबड मेरो अनुहार मा नजर किनभने मेरो पति भन्नुभयो, कल गर्नुपर्छ जसले? अनि मैले भने, स्पष्ट, हामी किनभने यो नम्बर मा थियो हाम्रो फोन नम्बर । चांग: क्रिस गैलिलियो, उमर विलियम्स, एलेक्स र जनसन छन्, सबै सिकार को के भनिन्छ छिमेकीलाई. यो जब कलर भेस आफ्नो वास्तविक फोन नम्बर संग एक नक्कली फोन नम्बर छ कि एउटै क्षेत्र कोड र उपसर्ग. विचार छ, तपाईं हुन सक्छ, अधिक संभावना माथि टिप्न किनभने, शायद तपाईं सोचिरहेका छौं, यो कल हुन सक्छ, मेरो छिमेकी वा मेरो बच्चा स्कूल, कसैले मलाई थाहा छ । पै: ओह, हाँ. ‘ हुन लाग्न सक्छ देखि आउँदै क्षेत्र कोड छ, जो यहाँ वाशिंगटन मा, र त्यसपछि हाम्रो उपसर्ग लागि यी ‘. र म एक वास्तवमा लागि थाह कि, तपाईंलाई थाहा छ, यो शायद छैन कसैले बोलाउनु कार्यालय देखि. मलाई थाहा छ, तपाईंलाई थाहा, सबैभन्दा को मान्छे हुनेछ जो कल. पै: र कहिलेकाहीं, म जवाफ को लागि बस बिल्ली यो । र हेर, म छु जिते एक छुट्टी देखि. चांग: कल खाएका छन् त्यसैले गम्भीर बनाउनु गर्न पावलले, उहाँले दुगनी तल र बनाउने विरुद्ध लड्न लागि प्राथमिकता एफसीसी.
भिडियो डेटिङ र हो कुनै
गुनासो एजेन्सी हुन्छ. नयाँ प्रविधिको बनाएको छ गर्न सजिलो र कठिन पत्ता लगाउन छ । गत वर्ष, मान्छे बारे प्राप्त छ । अर्ब भिडियो डेटिङ हरेक महिना. यो मिल्यो बेहद आकर्षक लागि घोटाला कलाकार । पै: यी कल सेन्टर थिए कि खोल भारत मा बस गत वर्ष, उदाहरणका लागि, थिए उत्पन्न केहि जस्तै $, हरेक एकल दिन देखि अमेरिकी जो उपभोक्ताहरु, मा एक कल प्राप्त थिए, स्वाभाविक, डर — विशेष गरी भने, तिनीहरूले थिए, वृद्ध वा हाल आप्रवासी र जस्तै — र थिए विभाजन गर्दा पैसा भन्दा, ‘ यो योगदान. चांग: त्यसैले यो वसन्त, एफसीसी जांच सुरु गर्न तरिकामा गरौं फोन वाहक ब्लक कल देखि. पै: केही फरक कारण — एक थियो, अन्तर्गत एफसीसी गरेको नियम, वाहक थिए माध्यम कि कुनै पनि कल तिनीहरूले मिल्यो । चांग: तर त्यो परिवर्तन भएको छ । अब, फोन वाहक गर्न अनुमति ब्लक केही. अन्तिम समाधान, पावलले भन्छन्, एक नयाँ प्रणाली छ कि गर्न सक्छन् वास्तवमा प्रमाणित कलगर्नेवाला. पै: त्यहाँ छ एक अद्वितीय पहिचायक छ कि एक संग सम्बन्धित फोन नम्बर मा, तपाईं भने. र त, जब एक कल राखिएको छ प्रयोग भनेर फोन नम्बर, यो प्राप्तकर्ता भन्ने कल गर्न सक्छन् हरेक भरोसा भनेर थाह पाउँदा, ठीक छ, यो डिजिटल औंठाछाप लागि भनेर नम्बर । म भरोसा गर्न सक्छौं कि यो एक घोटाला कलाकार वा अरू कसैलाई छ, जसले को मालिक को संख्या । चांग: त्यतिन्जेल मा, एफसीसी प्रयोग कम फैंसी तरिका विरुद्ध. यो हालै प्रस्तावित एक रेकर्ड $ मिलियन राम्रो विरुद्ध जो एक मान्छे कथित मिलियन भिडियो डेटिङ गत वर्ष छ । चांग, समाचार छ ।
← सबै भन्दा राम्रो मुक्त अनलाइन डेटिङ साइटहरु
पत्ता निःशुल्क →